Xuseen Carab “Laamaha ammaanka ayaa ka gaabiyay inay ka hortagaan weerarkii Muqdisho” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xuseen Carab “Laamaha ammaanka ayaa ka gaabiyay inay ka hortagaan weerarkii Muqdisho”
Waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo baxaayay dhaliilo adag oo loo jeedinaayo sida ay laamaha ammaanka u sugaan amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana la sheegay in arrinkaasi uu wax weyn ka qaldan yahay.
Guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xuseen Carab Ciise oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu jiro qal-qal dhinaca ammaanka ah oo aad u weyn, kaas oo ka taagan magaalada Muqdisho, islamarkaana aysan haboonayn qaabka ay ciidanka ammaanka amniga u sugayaan.
Wuxuu gudoomiyaha sheegay in goobo dhowr ah oo magaalada Muqdisho ka tirsan ay weerareen Al-shabaab, balse weeraradaasi ay ka horeeyeen digniino soo baxay oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa weeraradaas, laakiinse aysan dhicin in laga hortago.
Gudoomiye Xuseen ayaa dhinaca kale tilmaamay in laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya looga fadhiyo inay la yimaadaan qorshooyin cad oo ku aadan suggida ammaanka magaalada Muqdisho, si loo badbaadiyo shacabka dhibaatada soo gaareysa.
“Marka hore waxa magaalada Muqdisho ka jirta qal-qal weyn oo xagga dhinaca amniga ah, digniino loo baahnaa in laga hortago ayaa horay usoo baxay, balse laamaha ammaanka ayaa ka gaabiyay inay ka hortagaan weerarkaas” Sidaasi waxaa yiri Xuseen Carab Ciise.
Dhinaca kale, Xarakada Al-shabaab ayaa talaadadii aan soo dhaafnay waxay weerar ismiidaamin ah ku qaadeen agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, waxaana qasaare xoogan kasoo gaartay dad isugu jiray shacab iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo xilligaasi ku dhex sugnaa Hoteelka SYL oo xayn-daabkiisa lagu dhuftay gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho ayaa haatan ah mid uu ka jiro argagax islamarkaana aanan wanaagsaneyn, waxaana weli sii kordhaaya dhibaatooyinka amnidarada ah ee ay magaalada ka geystaaan Xarakada Al-shabaab.